I-Bay of Bengal: izici, umlando kanye ne-Andamanese | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla silibangise e-Indian Ocean, ikakhulukazi endaweni esenyakatho-mpumalanga. Nayi ifayili le- igebe le-bengal, eyaziwa nangokuthi iBay of Bengal. Umumo wayo wawufana nonxantathu futhi unqamula enyakatho yisifundazwe saseWest Bengal futhi njengeBangladesh, eningizimu yiSri Lanka Island kanye nendawo yaseNdiya yeziQhingi zaseAndaman naseNicobara, empumalanga yiNhlonhlo yaseMalay kanye nase entshonalanga nezwekazi laseNdiya. Kuyinto igebe elinomlando oyingqayizivele okwenza likuthakazelise impela.
Ngakho-ke, kule ndatshana sizokutshela ngezimpawu nomlando weGulf of Bengal.
2 Umlando weGulf of Bengal
3 Abantu eBay of Bengal
4 Izifundo zabantu
Inendawo ephelele okungenani engamakhilomitha-skwele ayizigidi ezi-2. Kubalulekile ukwazi ukuthi imifula eminingi emikhulu igeleza isuka kuleli gebe. Phakathi kwale mifula, uMfula iGanges wagqama njengomfula omkhulu ongcwele ongumfula waseNdiya. Futhi ungomunye wemifula emikhulu e-Asia. Enye yemifula egelezela kulelikhala i umfula iBrahmaputra owaziwa ngokuthi yiTsangpo-Brahmaputra. Yomibili le mifula ifake inqwaba yesidumbu ebangela ukuthi kube nomthandi omkhulu wakwalasha endaweni yesikhala.
Yonke indawo ye-Bay of Bengal ihlaselwa njalo yizikhukhula kungaba ebusika noma ehlobo. Umthelela walesi simo ubanga ukuthi kungaba neziphepho, amagagasi olwandle, imimoya enamandla ngisho neziphepho ngenkathi yasekwindla. Kukhona nezinye izinto zemvelo ezenzeka ngenxa yokwehluka kwesimo sezulu emanzini aso. Njengoba inikezwe indawo, amanzi eBay of Bengal anesibalo esiqhubekayo sezimoto zasolwandle. Lokhu kwenza kube umzila obalulekile wezohwebo onentshisekelo enkulu yezomnotho.
Ayinayo nje intshisekelo yezomnotho yokwenza imisebenzi yasemanzini njengokudoba, kepha futhi inezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezithakazelisayo. Izidumbu ezithwalwa yimifula zibhekele izakhamzimba ezondliwa yi-phytoplankton ne-zooplankton.. Ogwini lweGulf of Bengal sithola amachweba emvelo abalulekile njengeCalcutta, lena ebaluleke kakhulu ngokuba nomkhakha wezohwebo nowezimali.
Ukudla, imikhiqizo yamakhemikhali, okokusebenza kagesi, izindwangu kanye nezokuthutha kukhiqizwa kulo lolwandle. Lonke lolu hlelo lwemisebenzi lwengeza ukubaluleka okukhulu kwezomnotho kuleli gebe. Ngizoba yilokho esikubonayo emlandweni siyabona ukuthi le ndawo yaqhunyiswa ngamabhomu ngamaJapane ngesikhathi se- Impi Yezwe Yesibili yalokho okubhekwa njengendawo yomlando.
Umlando weGulf of Bengal
Njengoba sishilo ngaphambili, leli gebe linomlando owehlukile owenza ukuthi ube mnandi impela. Lawa mazwe ahlanganiswa amaPutukezi ekuqaleni. Enye yezindawo zokuhlala ezinkulu kwakuyiSanto Tomé de Meliapor, namuhla kuphenduke umjondolo wedolobha laseMadras eNdiya. Ngo-1522 amaPutukezi akha isonto futhi eminyakeni eyalandela base bevele sebakhe idolobha elincane esizeni. Ngokwezilinganiso zaleso sikhathi, ngekhulu le-XNUMX iSão Tomé kwakuyidolobha, yize kungangabazeki ukuthi abaseYurophu babamba iqhaza elibalulekile ekuthuthukiseni umlando walesi sifunda.
Babengabaqhubekeli phambili bemisebenzi yamasiko wangaphambilini kunabaqali bentuthuko entsha. Namuhla, ochwepheshe abacwaninga ngemvelaphi nomlando walesi sifunda sonke bayakholelwa lokho ithonya kulesi sifunda lobudlelwano bokuqala bokuhweba nabaseYurophu selibekiwe kakhulu. Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi inani labathengisi base-Asia abangenisa futhi bathumela amabhethri eGulf of Bengal laliphakeme kunelaseYurophu. Phakathi kwezinto zokusetshenziswa ezithengiswa kakhulu sinosilika nezinye izindwangu.
Abantu eBay of Bengal
Kunemfihlakalo exhumanisa iBay of Bengal nesizwe esinciphise kakhulu abantu baso. Bambalwa abasalayo kepha hhayi ngoba sebephelile kodwa ngoba iningi labo liphinde labuyiselwa ngabantu abangomakhelwane. Imayelana namanye ama-Andamanese bahlala esimweni sabo esingahlanzekile futhi bayigugu lesayensi. Bangabomdabu base-Andaman naseNicobar Islands eBay of Bengal. Manje sekunaba-500-600 kuphela abagcina isiko labo ngokuphelele futhi kuphela kubo abangamashumi amahlanu abakhuluma ulimi lwabo lokhokho.
Laba bantu abaphilayo basaphila ebhokisini naseqoqweni njengoba kwenzeka ngomuntu endaweni yangaphambi komlando, bayaqhubeka nokuzingela izinhlanzi ngomnsalo nangomcibisholo ezikebheni zabo futhi bayabazi ubuciko bokubumba nobumba bensimbi. Ulimi lwabo alunalo uhlelo lwezinombolo ngakho-ke kufanele basebenzise amagama amabili akhombisa izinombolo: eyodwa nangaphezulu kwelilodwa. Zonke zimfushane ngesiqu futhi zimnyama esikhunjeni kunabantu baseNdiya abazungezile.
Imfihlakalo yala ma-Andamanese ibilokhu ijula ​​kepha ichitheka ngasikhathi sinye. Kunocwaningo olukhulu lwe-genomic olugxile ekutadisheni izingcezu ze-Neanderthal DNA kuma-genomes abo. Ziveze izimpawu zeziphambano zasendulo ezinabantu bakudala futhi abangaziwa. Konke lokhu kuyindida entsha ethokozisayo eyenza laba bantu bakufanele ukutadisha. Ucwaningo lucacisa eminye imibuzo ngalaba bantu ababaluleke kakhulu. Futhi ukuthi bahluke kakhulu kwabanye abantu baseNingizimu Asia njengoba uphenyo oluningi seluphethe ngokuthi laba bantu abanesimo esifushane nombala omnyama babengumkhiqizo wokufuduka ngaphandle kwe-Asia. I-Afrika yehlukile futhi izimele kunaleyo eyenziwe yiplanethi yonke eminyakeni engaphezudlwana kwengu-50.000 XNUMX edlule.
Kamuva kwezinye izifundo kukhombisa ukuthi lokhu akunjalo. Umbala uyefana nathi sonke esasinawo ngenkathi sishiya i-Afrika umhlaba wonke. Uchaza nokuthi ubude bakhe obufushane buwumkhiqizo we inqubo enamandla yokukhethwa kwemvelo njengoba kwenzekile nezinye izinhlobo zeziqhingi. Kwezemvelo ezinobuningi bezihlahla akulula ukuthi kube phezulu kangako ngoba kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi ekugcineni kugcina sekuba nezinkinga zokushayisana namagatsha.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeBay of Bengal nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » AmaGulf of bengal